Adeegii Ugu Horreeyay Ee Seaplane Ah Oo Dhexmara Boston Harbor iyo Manhattan Oo Lagu Dhawaaqay | Wararka Diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Waxaa la shaaciyey Adeeggii ugu horreeyay ee Seaplane ee u dhexeeya Boston Harbor iyo Manhattan
Waxaa la shaaciyey Adeeggii ugu horreeyay ee Seaplane ee u dhexeeya Boston Harbor iyo Manhattan
Boston Harbor ilaa adeegga Manhattan ee Bariga Webiga ee loo maro seaplane waxay yareyneysaa wadarta waqtiga safarka 40% ilaa 60%.
Adeeg cusub oo la qorsheeyay ayaa abuuraya habka ugu dhakhsaha badan ee u dhexeeya Manhattan iyo Boston.
Duulimaadyadu waa ku dhowaad toddobaatan iyo shan daqiiqo oo waxay bilaabmayaan Ogosto 3deeda, 2021.
Duulimaadyada aan joogsiga lahayn, maalmaha shaqada ee saacadaha ugu badan ee ka imaada ama ka yimaada Manhattan iyo Boston Harbor waxay soo bandhigaan waqti kayd ah oo u gaar ah dhammaan noocyada kale ee gaadiidka.
Hawl wade markab Hawada Tailwind wuxuu ku dhawaaqay adeeg qorshaysan dhulgariir, abuurista habka ugu dhakhsaha badan ee u dhexeeya Manhattan iyo Boston. Socdaalayaashu waxay hadda ku raaxaysan karaan duulimaad aan joogsi lahayn, oo si toos ah uga socda Manhattan's New York Skyport (NYS) oo ku taal Bariga 23rd Street illaa Boston Harbor (BNH), halkaas oo takhasus u leh, toddobo daqiiqo oo taksi oo biyo ah ay macaamiisha ugu wareejinayaan dhinaca koonfureed ee Boston. Duulimaadyadu waa ku dhowaad toddobaatan iyo shan daqiiqo oo waxay bilaabmayaan Ogosto 3deeda, 2021.
"Adoo siinaya duulimaadyo aan joogsi lahayn, duulimaadyada maalmaha-shaqooyinka saacadaha ugu badan ee ka imanaya ama ka imanaya Manhattan iyo Boston Harbor, waxaan soo bandhigeynaa waqti gaar ah oo lagu kaydin doono dhammaan noocyada kale ee gaadiidka, qiimo jaban oo macquul ah," ayuu yiri Maamulaha iyo Aasaasaha Tailwind Air, Alan Ram. Adeegyadeena [Tailwind] waxay isku daraysaa marin u helka tareenka iyo xawaaraha duulimaadka. ”
"Maraakiibta badda iyo marin biyoodka waxay shidaal ka dhigayaan adeegeena khaaska ah - bedelida ciyaarta ee safrayaasha u kala goosha magaalooyinkan," ayuu raaciyay Peter Manice, oo ah Agaasimaha Hawlgallada Qorshaysan, "cid kale oo tan samaynaysa ma jirto." Marka laga gudbo ciriiriga ka jira Boston Logan International oo ah tii ugu horreysay ee si toos ah ugu duusha Boston Harbor, Tailwind Air waxay horseed u tahay dhaqdhaqaaqa magaalooyinka, iyadoo adeegsaneysa tikniyoolajiyad muddo dheer la hubiyay.
Adeeg cusub ayaa tirtiraya dhibkii iyo kharashkii u raacay gegida diyaaradaha iyo soo-galid dheer, nabadgelyo, iyo hawlo diyaaradeed. "Ayadoo la jareyno waqtiyada safarka 40% -60%, adeegga Tailwind Air wuxuu yareynayaa xumaanta wuxuuna furayaa safarro maalin badhkeed ah." Sababtoo ah sideedda rakaab ee rakaabka badda, iyo tas-hiilaad yar oo wax ku ool ah, martida ayaa imaan kara si loo hubiyo in yar wax ka yar toban daqiiqo ka hor safarka.
In kasta oo diyaaradaha badda ee Tailwind Air ay yar yihiin, wax ka yar shan sano isku celcelis, safarka seaplane dhab ahaan maahan. Manhattan Skyport wuxuu furmay 1936, wuxuu martigaliyay safarka caanka ah ee badmaaxiinta tobanaan sano. Ku dhowaad 100 sano, hawlgallada baddu waxay qayb ka ahaayeen muuqaalka guud ee gaadiidka magaalooyinka badda sida Seattle, Miami, iyo Vancouver. "Markaan isku xirno Boston iyo Magaalada New York adoo maraya seaplane, waxaan si dhow u mideyn doonnaa laba xudun magaalo."
"Aniga oo ah rakaabka ugu weyn Waqooyiga Ameerika ee ka shaqeeya Cessna Caravans, Southern Airways waxay ku faraxsan tahay lashaqaynta labadii sano ee la soo dhaafay mid ka mid ah howl wadeenada shirkadda Caravan ee duulimaadka badda, Tailwind Air, ”ayuu yiri Stan Little, Guddoomiyaha iyo Agaasimaha Guud ee Shirkadda Duulimaadyada ee South Airways. “Isku xirka magaalooyinka Boston iyo New York ee dhanka hawada ah runtii waa wax badala ciyaarta, waana ku faraxsanahay inaan noqono lamaane gaar ah oo shirkad wadaag ah howshaan.”
Maraakiibta Tailwind Air ee Cessna Grand Caravan EX Amphibians waxaa tijaabinaya kabtanno khibrad iyo aqoon sare leh. Tailwind Air waxay hada u duulaysaa kana soo duushaa Manhattan, Montauk, Easthampton, iyo Shelter Island jadwal joogto ah. Toddobaadkii hore, Tailwind ayaa ku dhawaaqday duulimaadyada duulimaad ee usbuuca ee Bridgeport, CT.
Wadada maalinlaha ah ee usbuuca laga bilaabo Boston Harbor (BNH) ilaa Manhattan (NYS) ee socotaa ilaa Nofeembar waxaa ka mid ah:
Safarka: 07: 00am Yimaada: 08:25 subaxnimo (eff Aug 21, 2021)
3:35 galabnimo (eff Aug 21, 2021)
Daily Manhattan (NYS) ilaa Boston Harbor (BNH)
Safarka: 08: 00am Imow: 09: 25am
10:55 am (Eff Aug 21, 2021)
6:05 pm (Eff. Ogast 21, 2021)
Tailwind Air waxay qorsheyneysaa inay ku darto wadooyin siyaado ah oo dheeraad ah sanadka 2022, iyo sidoo kale inay horumariso tikniyoolajiyadda korantada ee korantada ayna sahmiso hal-abuurnimada dhaqdhaqaaqa hawada magaalooyinka.